Mogadishu Journal » Madaxweyne Xassan Sheekh” dowladda weyn dhaqan-galin doontaa qodobada ka soo baxa shirka culimada
Mjournal : — Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud oo ka qeyb-gallay kulan magaalada Muqdisho maanta uga furmay culima’udiin Soomaaliyeed oo looga hadllayay fahamka qaldan ee Diinta iyo xagjirnimada, ayaa sheegay in dowladda federaalka dhaqan-galin doonto qodobada ka soo baxa shirka.
Khudbad uu ka jeediyay shirka ayuu madaxweyne Xassan Sheekh Max’uud ku booriyay in ay culimada ka saxaan sida uu hadalka u dhigay bulshada fikirka qaldan ee laga yaabo in qaarkood ay ka qaateen Diinta Islaam-ka, iyaga oo culimada tilmaamaya dariiqa saxda ah ee shareecada Islaam-ka.
”Dowladda federaalka waa ay soo dhaweyneysaa shirka culimada uga furmay magaalada Muqdisho, waa shir muhiim ah, dowladdana waxaa ay ballan-qaadeysaa in ay ku camal-fali doonto qodobada ka soo baxa shirka,” ayuu yiri madaxweyne Xassan Sheekh Max’uud.
Madaxweynaha ayaa khubadiisa ku soo qaatay qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay, isaga oo sheegay in qaraxyadaasi qeyb ka yihiin xagjirnimada, isagoo dadkii ku dhintay u rajeeyay janno, dadkii ay kasoo gaareen dhaawacyaduna u rajeeyay caafimaad deg-deg ah.
”Lama aqbali doono kuwa dhiiga sida micno darrada ku daadinaya, marka lasoo qabto ciqaab ayeey mari doonaan, mana ogolaan doono in shaqsiyaadka noocaas ah la difaaco,” ayuu yiri madaxweyne Xassan Sheekh.
Shirka maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa ku soo beegmaya xili maanta uu magaalada Muqdisho ka furmay shir looga hadllayo xagjirnimada iyo waliba fahmka qaldan ee Diinta Islaam-ka.